मोटरसाइकलबाट खसेर घाइते भएकी महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु
३० चैत, पोखरा । मोटरसाइकलबाट खसेर गम्भीर घाइते भएकी एक महिलाको पोखरामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा म्याग्दे गाउँपालिका–६ छबिसे बस्ने ५५ वर्षीय सानुमाया सार्की रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
थर्पु बजारबाट छबिसेतर्फ जाँदै गरेको ग ७ प ५३२३ नम्बरको मोटरसाइकलबाट खसेर मोटरसाइकलमा सवार सार्कीको मृत्यु भएको हो । मोटरसाइकलबाट खसेर घाइते उनको पोखरास्थित फेवासिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मोटरसाइकल चालक प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।
यस्तै पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–४ सानो डुम्रेमा ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल ठोक्किदा मोटरसाइकल चालक घाइते भएका छन् । डुम्रेबाट विमलनगरतर्फ जाँदै गरेको ना ५ त २७३० नम्बरको ट्र्याक्टरले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बा ९७ प १८७१ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा नुवाकोट बिदुर गाउँपालिका–१२ बस्ने २७ वर्षीय नवराज पौडेल घाइते भएका हुन् ।
उनको स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ ।
बुद्ध एयरका दुई जहाज त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण, भएको के हो ?
बोलेरो गाडी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
आ-आफ्नो रणनीति बनाउँदै नेकपाका दुवै समूह
फिल्म ‘हिटलर’ युटुबमा सार्वजनिक
ओली सरकारलाई भारतको सद्‍भाव ?
साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से परिसूचकमा २५ अंकको वृद्धि
‘कमरेडहरू’लाई केपी ओलीका खसोखास कुरा – ‘दक्षिणले अब दुःख दिँदैन’
भीमफेदी सुमो दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुग्यो (अपडेट)
मदन पुरस्कार विजेता पूर्व प्रमुखसचिव खनालको निधन
बझाङमा बाघको छाला र हड्डीसहित दाजुभाई पक्राउ